Zaw Thu Aung | Edu Myanmar | Online Classes | Center Classes
ဖောင့်များ နှင့် ကီးဘုတ်များ
(95) 09 968898766
2. IT and Mobile Courses
4. Art and Design Courses
5. Beauty and Life Courses
6. Science Courses
7. Other Vocational Courses
၈၊ အတန်းပညာ (ဂိုက်)
8. Academic Guide Courses
ပညာရေးနှင့်အလုပ်သတင်းများEdu & Job News
သင်ထောက်ကူများDownload & Tools
သင်ထောက်ကူမိုဘိုင်း AppsများLearning Mobile Apps
ဖောင့်များ နှင့် ကီးဘုတ်များMyanmar Fonts & Keyboards
ဇော်ဂျီယူနီပြောင်းလဲZawGyi Uni. Converter
ပို့စ်များအားလုံး − မှZaw Thu Aung
Zaw Thu Aung ကိုယ်ရေး
One ‘s Desires…Education Never Too Far – ပညာရေးဝေးသည်မရှိ
Zaw Thu Aung
ပညာရေးဝေးသည်မရှိ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့သော ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် အဆင့်မြှင့်ပညာရေးရပ်များကို ဝါဿနာပါပြီးသင်ယူလေ့လာခွင့်ရယူလိုသူလိုသော်လည်း ငွေကြေးအခက်အခဲ ၊ ပညာအခက်အခဲ နှင့်အခြားသောအခက်အခဲမြောက်မြားစွာတို့ကြောင့် မတတ်နိုင်ကြသူများ ဒုနှင့်ဒေးပင်။ ထိုသို့အခက်အခဲအကြပ်အတည်းများက နိုင်ငံတစ်နိုင်ကိုဦးဆောင်တည်ဆောက်မည့် အဖိုးထိုက်တန်လှသော လူငယ်လူရွယ်များ၏တိုးတက်ရေးအား အကြီးအကျယ်ဟန့်တားနေသည်။ သို့သော်လည်း တိုးတက်နေသာ နည်းပညာနှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံမှကလေး …
Mobile e-learning Classes – မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်သင်တန်းတက်မယ်။
မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်သင်တန်းတက်မယ်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုးတက်လာသောလူမူနေထိုင်မှုဘဝနှင့်အညီ မိုဘိုင်းဖုန်းပညာရေးမှာလည်း ထိရောက်အသုံးဝင်သော ပညာရေးကွန်ယက်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဖုန်းအသုံးပြုသူအရေအတွက်များ နိုင်ငံတဝန်းများပြားလာခြင်း နှင့် သင်ယူရာတွင်အချိန်နေရာ ၊ ဒေသကန့်သတ်မှုလုံးဝမရှိခြင်းတို့ကြောင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှလူငယ်များ ၊ လူလတ်ပိုင်းများအားထားရာ နယ်စည်းခြားနားခြင်းမရှိသော အားလုံးတန်းတူညီမျှပါဝင်နိုင်​သော ပညာရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မိမိ၏ဖုန်းဖြင့် မိမိစိတ်ကြိုက်တက်ရောက်လိုသော …
Online Learning Benefits – အွန်လိုင်းပညာရေး၏အကျိုးကျေးဇူးများ
အွန်လိုင်းပညာရေး၏အကျိုးကျေးဇူးများ အဆင်ပြေချောမွေ့မှုများ နေ့စဥ်သင်တန်းသို့ အသွားအပြန်လုပ်စရာမလိုခြင်း။ ထို့ကြောင့် သင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဥ်၏ အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းဖြစ်သော လေ့လာခြင်းကို အချိန်ပြည့်ထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်ပေမည်။ နယ်စည်းမခြားဘဲ ဆည်းပူးလိုသောပညာရပ်များကို အချိန်မရွေးလေ့လာသင်ယူနိုင်ခြင်း။ ထို့ကြောင့် နေရာဒေသအခက်အခဲကို ကျော်လွှားပြီး သင်ယူလိုသောဘာသာရပ်ကိုသင်ယူပြီး ဘဝတိုးတက်ရေးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီ။ သင်ကြားချိန်ကန့်သတ်မှုမရှိခြင်းကြောင့် မိမိ၏လက်ရှိလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို …
Elearning for Developing Countries like Myanmar
Elearning for Developing Countries like Myanmar Elearning and Its revolution Elearning for developing countries like Myanmar Elearning and Its …
Vocational Education က ဘာရမှာလဲ???
Vocational ဟုဆိုလိုက်ကတည်းက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်အကိုင်ရရှိမှုကို ရည်ရွယ်သော ပညာရေးတခုဖြစ်သည့်အားလျှော်စွာ AutoCAD သင်ကြားသူသည် AutoCAD အလုပ်ရရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းဆင်းများသည် လုပ်ငန်းနယ်ပယ် (Industry) တွင် လိုအပ်သောအတတ်ပညာများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အတိအကျသိရှိသင်ယူခဲ့ရ၍ တန်ဖိုးရှိသော ဝန်ထမ်းများဖြစ်လာမည်မှာ …
Vocational Education ဆိုတာဘာလဲ???
Vocational Education ဆိုတာ လက်မှုပညာများ၊ ကုန်သွယ်မှုများ၊ နည်းပညာရပ်များ (သို့) အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်များ စတဲ့ အင်ဂျင်နီယာအလုပ်၊ စာရင်းအင်းအလုပ်၊ သူနာပြုအလုပ်၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်၊ ဗိသုကာ မှသည် ဥပဒေပညာရပ်များအထိ လူများ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် အကြိုပြင်ဆင်ပေးသော ပညာရေးဖြစ်ပါသည်။ …
ဘာကြောင့်အမေရိကန်သမ္မတ Donald J Trump က Vocational Training ကို အရေးကြီးတယ်ထင်ရတာလဲ။
၂၀ ဇွန်နဝါရီ ၂၀၁၇ မှာ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆို၍ အမေရိကန်သမ္မတ ရာထူးကို လက်ခံရယူခဲ့သော အမေရိကန်သမ္မတ Donald J Trump သည် သူ၏ မဲဆွယ်ပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည် (campaign promise) ကတိစကားများအနက် “Job”, …
မိရိုးဖလာပညာရေး (Traditional Education) နှင့် အွန်လိုင်းပညာရေး (Online Learning) ၏အကျိုးကျေးဇူး
အင်တာနက်ပေါ်မှတဆင့် ယနေ့အခါကမ္ဘာတဝှမ်းက သန်းချီသော ကျောင်းသားများသည် Online Degree များကို တက်ရောက်လေ့လာသင်ယူနေကြပါသည်။ အနည်းဆုံးတော့ Online Course များကို Online မှဖြေကြား၍ အောင်လက်မှတ်များ ရယူလာကြပါသည်။ တက္ကသိုလ်၊ သင်တန်းကျောင်းများတွင် သင်ယူရသော မိရိုးဖလာပညာရေး …
အတန်းပညာ (Academic) Vs. အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာ (Vocational)
Teaching Style Academic − စာဖတ်ခြင်း၊ Information များကြားနာခြင်း၊ သင်ခန်းစာများကို အခြေခံပါသည်။ Academic − တခါတရံ စည်းကမ်းလိုက်နာတတ်ခြင်းကို စာသင်ကြားခြင်းထက်ပင်ပို၍ ဦးစားပေးတတ်ပါသည်။ Academic − လက်တွေ့အသုံးချခြင်းထက် သီအိုရီများ၊ အယူအဆများ …
Pro Net အကြောင်း
သင်ယူသူများ နှင့် သင်ပြသူ (ဆရာ) များ အွန်လိုင်းပေါ်မှတဆင့် တိုက်ရိုက်ပညာသင်ပြ၊ သင်ယူနိုင်သော Online Edu Portal ဖြစ်ပါသည်။
သင်ယူသူများ − သင်ယူလိုသောသင်တန်းများကို နှစ်သက်သောဆရာများထံမှ တိုက်ရိုက် "သင်ယူ" ပါသည်။
နည်းပြဆရာများ − Virtual Classroom (VC) မှတဆင့် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်၍ တိုက်ရိုက် "သင်ပြ" ပါသည်။
Pronet လိပ်စာ : ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ ကျောက်တံတား မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ ဖုန်း +၉၅ ၉၉၆၈၈၉၈၇၆၆
Freedom Edu Portal
Quick Link များ
2017 - အိုင်တီမြန်မာ မှဦးစီးတည်ထောင်သည်။